Unogona here kundiudza zvose pamusoro peAmerica kugadzirisa kuti uite zvakakwirira?
Amazon optimization is a continuous practice, which mainly starts with off-page marketing (to increase sales), regular listing optimization (experimenting with bigger long-tail keywords and phrases to beat your niche competitors), as well as building a chinyararire uye kugamuchirwa kutenga nhoroondo. Uye iwe unoda kuramba uchishanda nesimba kuti uenzane neAmerica inogara ichichinja mazazvo emakethe - pakupedzisira, kuti ugare kunze kwemakwikwi uye utungamirire. Zvechokwadi, zvingaratidzika seine basa rinotyisa uye rinopedza nguva, asi pasi ndiri kuenda kunyorera urongwa hwehutu hukuru pamusoro peAmerica kugadzirisa iwe, zvichida kuva nekambani yekutsvaga kuti utange kubva - nankang n766lf.
Amazon kugadziriswa inotanga ne Keyword Research
Sezviri pachena, zvigadzirwa zvose zvakanyorwa panzvimbo iyi yemisika yemisika zvinogona kuwanikwa chete nemubvunzo unotsvaga wekutsvaga une chinangwa chikuru chakakosha keywords. Ndicho chikonzero chiitiko chekugadzirisa maitiro chinofanira kugara chichitanga pano nemashoko akazara uye akadzika mazwi ekutsvakurudza mazwi. Kuita zvinhu zvishoma zvishoma, unogamuchirwa kuedza chero ipi zvayo inozivikanwa yakagadziriswa zvishandiso (Sonar, somuenzaniso). Inzwa wakasununguka kuedza mumwe wavo uye kubatsirwa nemashoko anotsanangurwa pamusoro pekukumbira kwevatengi chaivo, uyewo mamwe mazano anoshanda ekutsvakurudza kwevamwe kwemashoko makuru nemashoko ekukosha kuAmazon.
Keyword Selection - yeuka, asi vanenge 97% vevatengesi vanowanzoenderera nejiji yekutanga yemigumisiro yekutsvaga, chimwe chinhu chinenge 70% yemibvunzo yekutsvaga iri kuuya semisara yakareba mikuru.
Sarudza Nzvimbo Yakarurama-funga kurongeka kwechigunwe chekugadziriswa kwemashoko, sezvinotevera: chigadzirwa chebhuku rakapfuma rine mazwi anokosha uye LSI zvinyorwa, zvinyorwa zvebhuruti zvinosanganisira refu-misiki keywords (pamusoro pekushandisa, zvipo, zvigadzirwa zve chigadzirwa, nezvimwewo).
Murefu-mutsva Amazon Kugadzirisa - zvinogona kunge iri basa rakaoma uye rinopedza nguva pano, asi kuisa pfungwa yako yekutsvakurudza mazwi kunyanya pamutsara wekutsvaga mutsva ndeye CHINOFANIRA - kwete kungoverenga mazita asi Pay-Per -Chocheza matangazo pamwe chete..
Chikupedzisira chinouya Amazon SEO neCTR
Ngatitarisei - rimwe nerimwe rekoni uye musanganisi wemisidhari yakareba kuAmazon inoshandiswa. Icho chinoreva kuti CTR inogara ichigadziriswa pane imwe neimwe yezvinyorwa uye inowirirana. Taura zviri nyore, iyo CTR yakakwirira ndeyo, iyo inogona kunge yakakosha iyo yakabatana nemuiti.
Pano pfupi pfupi yezvinhu zvikuru zvinotyaira CTR:
Mutengo Wemusoro & Image
Zita Rekugadzira ne Bestseller Label
Availability & Rating
Product Category, Feature Preview, uye Zvose Zvokutenga Zvimwe
Amazon Reviews and Mutengo
Kunyange uchifunga nezvekuvandudzwa kwezvinoitika kuongorori rezvekuongorora sarudzo kunze uko, maongorori akaramba ari chikamu chakakosha chehuwandu hweAmerica yekugadzirisa hurongwa. Sei? Nokuti ivo vanokwanisa kutyaira CTR yako. Ndinoreva kuti iwe unofanira kuramba uchitarisa kuongororwa kwevatengi, kuti vawane zvakaipa vakapindura nenzira yakakodzera (nokuda kwechimwe chikonzero izvi zvakajeka zviito zvinowanzoregererwa nevatengesi vakawanda). Nenzira iyo, iva nechokwadi chekupa mvumo yekudzorera yezvakaipa kana / uye zvakaputsika zvigadzirwa, uye chero imwe nzira dzakasarudzika dzekugadzirisa mamiriro asina kunaka - kungoratidza kuti iwe unofarira nezvehutano hwechiitiko chekutenga uye kugutsikana kwevatengi.
Kuita kudaro, usakanganwa kuti Amazon iri kunyanya kushandisa zvigadzirwa zvakanaka kuburikidza nechiratidzo chekushanda. Zvakanaka, inogona kunge iri kink ye-no-brainer, asi kana uchangotanga uko, ndinokurudzira kuisa pfungwa yakasimba pamapurisa ekutsigira, kushandira maPP ads, kupa zvikwereti uye dzimwe nzira dzekusimudzira kutengesa, zvichida kuburikidza ne matanho okutanga ekushanda - kuwana imwe kutanga kutengesa nguva. Uye kumhanya chete kusina kunyatsogadzirwa kwepamusoro kunenge kusingakwaniki panguva iyoyo, kunyanya kufunga nezvekukwikwidzika kwemukati-kukwikwidza kune uko.